Iindawo ezinika umdla zotyelelo - uKhenketho loSapho | I-Seymour, IN | | IZiko leNdwendwe laseJackson County
Septemba 18, 2021 812.524.1914
yintoni esenza sikhetheke
IBrownstown Speedway yavula ngo-1952 kuHola wendlela 250 eJackson County Fairgrounds, enye yeekhilomitha kumazantsi mpuma eBrownstown. Ukhuphiswano lubanjwe ngoMatshi ukuya ku-Okthobha kwikota ye-mile ye-oval track kunye [...]
IMedora yaCoca iBhulorho
I-Medora Covered Bridge, eyakhiwa ngo-1875 ngumakhi omkhulu u-JJ Daniels, yeyona bhulorho inde inemigangatho emithathu emide e-United States. Ifunyanwa kufutshane neMedora kwimpuma yeMpuma yoMlambo iWhite off [...]
Ixesha elidlulileyo likaJohn Mellencamp lityalwe ngokuqinileyo eSeymour naseJackson County. UMellencamp wazalelwa apha nge-7 ka-Okthobha ka-1951. Umntu osinde msinya kwispina bifida, uMellencamp wakhulela eSeymour waphumelela [...]
Imyuziyam yaseFreeman Army Airfield
IMyuziyam yase lokishi
Ifumaneka kwi-4784 West State Road 58 eFreetown, imyuziyam linyathelo elibuyela umva kwixesha leentsomi zembali okanye abahlali bangaphambili nabangoku bendawo. Igqala kunye nezinto zomkhosi, iifoto zesikolo kunye [...]
Imyuziyam yaseFort Vallonia
IVallonia kunye neDriftwood Township ityebile kwimbali kwaye yayiyindawo yokuqala yokuhlala eJackson County. Imyuziyam yaseFort Vallonia, ebekwe kumhlaba wangaphambili, eyakhiwa ngo-1810, iyanceda [...]
IMyuziyam yokuPrinta yeConner
IZiko loLondolozo lweMbali likaJohn H. kunye noThomas Conner lokuPrinta ngeAntique yindawo yokushicilela esebenzayo yexesha lokushicilela nge-1800s, ebekwe kwiziko leZantsi leIndiana yezoBugcisa. Iindwendwe ziya [...]
IZiko lezeMbali laseJackson County
IZiko lezeMbali laseJackson County liquka zombini uMbutho wezeMbali kunye noMbutho woLuntu. Imyuziyam yezeMbali ivuliwe ukusuka kwi-9 kusasa ukuya kwi-11 kusasa ngoLwesibini nangoLwesine kwaye ngo [...]
Umboniso weZiko labaTyeleli laseJackson County
Ixesha elidlulileyo nelangoku iJackson County libhiyozelwa ngomboniso ovulwe ngoMeyi ka-2013 kwiziko labandwendweli iJackson County. Indawo enentliziyo nembali yonke, iindwendwe ziphathwa [...]
Regal 8 Ithiyetha yemuvi
Imbali yedolophu yaseSeymour
UMeedy W. Shields kunye nenkosikazi yakhe uEliza P. Shields babhalisa umhlaba wesixeko saseSeymour ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-Epreli ngo-27.
Imbali yedolophu yedolophu eBrownstown-Ewing
Tyelelo, Iindlela zembali
Ngaphantsi komhlaba kaloliwe
IJackson Live kunye neZiko leMicimbi
UJackson Live yindawo entsha yomculo kaSeymour. Ibonisa rhoqo ngeMigqibelo ebusuku nge-7 ngokuvulwa kweminyango ngo-6: 15 pm Amatikiti ayi- $ 15 kubantu abadala, $ 5 iminyaka emi-5 ukuya kweli-12 nabantwana abangama-5 nangaphantsi [...]
IShieldstown Ibhulorho eValiweyo
Tyelelo, Iibhulorho eziCwangcisiweyo
I-Shieldstown Covered Bridge yakhiwa ngo-1876 yaza yabizwa ngokuba yeyomzi-mveliso wosapho kwilali ekufutshane neShields. Ixabise i-13,600 yeedola kwaye ngumzekelo wenkulungwane yokuqala ye-19 ngomthi [...]
I-Skyline Drive yinxalenye yeHlathi likaRhulumente waseJackson-Washington. Lelinye lawona manqaku aphezulu kwiJackson County. Kukho iindawo ezininzi zokubukela ezivela kwindawo ephakamileyo kunye nepikiniki. [...]
UMascatatuck iNational Wildlife Refuge
IMuscatatuck National Refuge Refuge yasekwa ngo-1966 njengendawo yokubalekela yokubonelela ngendawo yokuphumla neyokondla iintaka zasemanzini ngexesha lokufuduka kwazo ngonyaka. Indawo yokusabela ikwiihektare ezingama-7,724. Kwi [...]
Indawo yoLonwabo yeNdawo yoLonwabo
Indawo yoLonwabo yeStar-Hollow State kubandakanya iihektare ezingama-280 ezibonelela ngeyona nkampu intle emazantsi eIndiana. Oqingqiweyo 18,000-eka eka Jackson-Washington State Ihlathi it [...]
Ihlathi likaRhulumente waseJackson-Washington
Ihlathi i-Jackson-Washington State Forest liquka iihektare eziphantse zibe li-18,000 e-Jackson nase-Washington. Indawo ephambili yehlathi kunye neofisi ibekwe kwi-2.5 mpuma ye [...]
I-Pinnacle Peak yindawo ekuhlalwa kuyo kwiHlathi likaRhulumente waseJackson-Washington elinikezela ngeembono ezimangalisayo.
Uloyiko olungenantlonelo- iNdlu yaseIndiana eyoyikeka kakhulu eHaunted yiyona nto inomtsalane. Kubanjwe ngeempelaveki ekwindla. Jonga zonke [...]
I-Racin 'Mason Pizza kunye neNdawo yoLonwabo
Indawo yoLonwabo yeRacin 'Mason yindawo efanelekileyo yokuthatha abantwana ukuzonwabisa. Go Karts, bumper cars, green light mini golf, arcade games, izindlu ze-bouncy, ukutya kunye nalo lonke ulonwabo onokulufumana [...]